Zimbabwe to host Australia, Pakistan for T20 tri-series in July - SportBrief
April 11, 2018 carlo chikomba 0 Comments Chevrons to play tri-series, Pakistan for T20 tri-series in July, zimbabwe cricket news, Zimbabwe to host Australia
The Chevrons have set out to put the 2019 World Cup disappointment behind them as they play hosts to Australia and Pakistan in a T20 tri-series encounter due three months from now.
Zimbabwe Cricket has confirmed that Australia and Pakistan will play Zimbabwe in a Twenty20 International tri-series from July 1, with the entire tournament set to be held at the Harare Sports Club.
The Chevrons will be hoping for a strong showing as they are still reeling from heartbreak after missing out on the 2019 World Cup via a shock defeat to the United Arab Emirates in last month’s World Cup Qualifiers played in Zimbabwe.
The result was followed by a controversial purging of the Zimbabwe Cricket (ZC) staff with coach Heath Streak and 12 other coaching staff members getting the sack.
While the tours had been under threat earlier due to Zimbabwe Cricket’s financial crisis, the ZC board have seemingly managed to resolve the issue following negotiations with the tournament broadcasters and sponsors.
Meanwhile, Pakistan’s last visit to Zimbabwe for a 2-match T20I and 3-match ODI series in 2015 ended in a thumping 2-0 victory for the Asian team in both formats.
Here is the T20 tri-series schedule:
← Roma stun Barca to book semi-final spot
Bobby Lashley makes HUGE WWE return →
PSL Games On
April 6, 2018 carlo chikomba 0
Ngezi Platinum and Dynamos Fined
November 22, 2017 Tongai Mwenje 0
West Ham suspends “racist” transfers’ director over African ban claim